အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Nayaye - ဝီကီပီးဒီးယား
If you want to experiment, feel free to do so. Don't be afraid of making mistake. We can rollback anytime to previous edit if we did some mistake. Thanks for your contributions. --Zawthet ၀၉:၁၃၊ ၂၁ စက်​တင်​ဘာ​ ၂၀၀၈ (UTC)
Creating Page for biography[ပြင်ဆင်ရန်]
I think it will be good that you create two page for each person for easier searching reference. For example, we have U Thant and ဦးသန့် for U Thant. English page is redirected to Burmese page by using #REDIRECT . When someone type the name in English or Burmese, it can easily redirect to the correct page. How do you think? If you need any help, please drop meamessage. --Zawthet ၁၄:၄၅၊ ၂၈ စက်​တင်​ဘာ​ ၂၀၀၈ (UTC)
ဓာတ်ပုံတင်နည်းကို အောက်ကစာမျက်နှာမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ 
အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့ [[Image:Tiger123.jpg|thumb|Picture of Tiger]] ဆိုတဲ့ လင့်ခ်မျိုး ဆောင်းပါးထဲမှာ ထည့်ပြီး သိမ်းလိုက်ပါ။ နောက် အဲဒီလင့်ခ်
ပေါ်ကို နှိပ်လိုက်ရင် ပုံတင်တဲ့စာမျက်နှာကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။Tiger123.jpg က ပုံရဲ့ ဖိုင်နာမည်ဖြစ်ပြီး Picture of Tiger ကတော့ ပုံအောက်မှာ ပေါ်မယ့်စာဖြစ်ပါတယ်။ thumb ဆိုတာကတော့ Thumbnail အနေနဲ့ တင်မယ်လို့ပြောတာပါ။အင်္ဂလိပ်ဝီကီထဲက တစ်ချို့ဖိုင်တွေကို ပုံတင်စရာမလိုပဲ ပုံရဲ့ဖိုင်နာမည်ကို ညွှန်းတာနဲ့ တိုက်ရိုက်သုံးလို့ရပါတယ်။ --Zawthet ၀၁:၂၈၊ ၆ အောက်​တို​ဘာ​ ၂၀၀၈ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ_ဆွေးနွေးချက်:Nayaye&oldid=18313" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၈၊ ၀၁:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။